Sucuudiga: Qoraa lagu xukuay 1000 Karbaash - Wargane News
Home Somali News Sucuudiga: Qoraa lagu xukuay 1000 Karbaash
Sucuudiga: Qoraa lagu xukuay 1000 Karbaash
Maxkamada Sucuudiga ayaa 1000 karbaash u qortay Qoraa u dhashay dalkaasi oo lagu eedeeyey inuu Diinta Islaamka wax ka sheegay.
Raif Badawi ayaa ah ninka sameeyey website lagu magacaabo “Free Saudi Liberals” kaasi oo ah mid wax ka sheega xaalada ka jirta dalka Sucuudiga.
Dowlada Sucuudiga ayaa ku eedaysay ninkan inuu websitekiisa ku faafiyey waxyaalo lid ku ah nidaamka dowlada Sucuudiga, sidoo kalena uu qoray qoraalo lagu dhaawacayo diinta Islaamka.
Maxkamada ayaa ku xukuntay ninkan in Shaabuug lala dhaco 1000 jeer, iyadoo jimce walba 50 shaabuug lagu dhufan doono goob fagaare ah, taasi oo socon doonta muddo 20 asbuuc ah.
Shalay oo Jimce ahayd ayaa 50kii karbaash ee ugu horeeyey lagu dhuftay Raif Badawi oo lagu karbaashay barxad ku taal Masaajid ku yaal magaalada Jiddah. Waxaana la sheegay in ciqaabtan la marsiin doono Jimce walba Salaada kadib, illaa ay u dhamaaneyso 1000 karbaash ee lagu xukumay.
Intaas kuma eka waxaa sidoo kale loo qoray xabsi 10 sano ah iyo waliba inuu bixiyo lacag ganaax ah oo gaareysa $266,000.
Qaramada Midoobay iyo hay’adaha Xuquuqul Insaankan ayaa xukunkan ku tilmaamay mid ka baxsan cadaalada iyo bini’aadamnimada, waxayna ugu baaqeen dowlada Sucuudiga inay arrintan joojiso.
Dad gaaraya 14.000 qof ayaa qoraal codsi ah u diray Boqorka Sucuudiga Cabdullahi inuu ninkan qoraaga ah ee la xukumay uu cafiyo.
Sidoo kale dowlada Maraykanka oo ay Sucuudiga xulafo yihiin ayaa ka codsatay Boqortooyada Sucuudiga inay xukunkan joojiso.
Waxaa xusid mudan in Maxkamada darajada 1aad ee Sucuudiga ay ninkan ku xukuntay 7 sano oo xarig ah iyo 600 karbaash balse, markii uu racfaan qaatay ayey maxkamadii Racfaanka usii kordhisay xukunka oo ay ka dhigtay 1000 karbaash iyo 10 sano xarig ah oo ay la socoto ganaaxa lacageed.
Qoraagan ayaa lagu heystaa eedaynmo iyo dhaliiceyn uu usoo jeediyey Qaar kamid ah culimada Sucuudiga, waxaana sidoo kale lagu heystaa qoraalo uu qoray oo uu ku sheegay in jaamacada Imam Muhammad ibn Saud Islamic University ay noqotay goob xarun ay kasoo baxaan dad argagaxiso ah.
Kaligiis maaha waxaa sidoo kale xabsi loo diray Qareenkii u doodayey ninkan, kadib markii uu sameeyey hay’ad u dooda xaquuqda ninkan, balse dowlada ayaa ku eedaysay Qareenkaasi inuu sameeyey hay’ad aan fasax ka heysan dowlada.
Somalia: Guddoomiye Jawaari oo booqday Safaaradda Soomaaliya ee dalka South Africa